UStibobo uzokhipha ingoma entsha | News24
UStibobo uzokhipha ingoma entsha
Senzo Mbeje owaziwa ngelika‘Stibobo’.ISITHOMBE : SITHUNYELWE
NGEMUVA kweminayaka emihlanu engakhiphi lutho umculi we-house nophinde abe ngu-Deejay (dj) ,uStibobo, ogama lakhe langempela nguSenzo Mbeje uzokhipha ingoma yakhe esihloko sithi Summer Love.
Le ngoma izophuma kusasa, mhla zingama-26 kuMfumfu (October).
Exoxa ne-Echo uStibobo uthe ubone sekuyisikhathi sokuba akhiphe izingoma futhi ukuze abantu bezokwazi ukuthi usakhona. Uthe lena yingoma yakhe yokuqala abuyela ngayo ekukhipheni izingoma ngemuva kwesikhathi eside.
“Ngifuna abantu bazi ukuthi ngisakhona emculweni kwazise bese siside isikhathi ngingakhiphi. Enye into futhi ukuthi sengifuna ukuqhubeka ngiphinde ngihambe umhlaba wonke ngisabalalise umculo wami.
“Lena yingoma emnandi kakhulu futhi nginethemba lokuthi abantu bazoyamukela kahle bazi nokuthi sengibuyile ekukhipheni izingoma,” kubeka yena.
UStibobo uphinde waveza ukuthi kumanje usematasa wenza enye ingoma yakhe yesibili nathi izoshisa kakhulu njengoba ethi izoba uhlobo lwengoma yalezi ezithandwa kakhulu manje. Uthe uhlela nokushutha i-music video yayo le ngoma ngenyanga kaZibandela ukuze izokwazi ukuthi igcine isidlala kumabonakude nayo.
Ngaphandle kokukhipha le ngoma nokuhlela ukuyishuthela i-music video uStibobo uzophinde agubhe iminyaka emihlanu asungula umcimbi waminyaka yonke owaziwa ngokuthi Umgungu Zwakala Picnic nobanjwa njalo mhla zili-16 kuZibandlela (December).
“Ngijabulile kakhulu ukuthi kulo nyaka ngizobe ngigubha iminyaka emihlanu ngawuqala lo mcimbi nokuyinto enkulu kumina. Lena akusiyona into encane ongayithatha kalula nje.
“Ngesikhathi ngiyiqala yayijwayele ukuba nabaculi balana eMgungundlovu kuphela ngoba nabo ngangifuna ukubanikeza ithuba lokuthi bazibonakalise kodwa kulo nyaka njengoba ngizobe ngiguba iminyaka emihlanu izobe isezingeni elicokeme kakhulu.
Kuzobe kukhona nabaculi bangaphandle okubalwa kubona u-K.O kanye nabanye engingeke ngize ngikwazi ukubadalula manje,” kubeka yena .
Uthe amathikithi akulo nyaka azotholakala e-Computicket maduzane ngemali engu-R250 umuntu ngamunye kanti i-VIP yona izoba u-R350, okubalwa kuwona neziphuzo kanye nendawo ephephile yokupaka izimoto.